AMD K12 inodzoka ...: inodzoreredza yayo ARM microarchitecture | Linux Vakapindwa muropa
AMD K12 inodzoka…: dzosa ARM yayo microarchitecture
Jim Keller paakanga ari kuADM, rimwe remabasa aakatanga raive iro K12 microarchitecture. AMD yakanga yatoburitsa yayo Opteron A-Series, yakavakirwa paARM Cortex cores, asi ivo vaida kuenda kumberi neyavo microarchitecture isina IP cores senge yapfuura iwo. Ndokunge, chinhu chimwe chete icho Apple Silicon yaita izvozvi. Asi icho chigadzirwa chakasiiwa ...
... kana kuti, ivo vakaisiya ichinyarara. Hapana chaizivikanwa nezvake, uye makore akati wandei apfuura kubvira chigadzirwa chekupedzisira chaifanira kunge chakaburitswa pasina kana chavanoziva. Iye zvino AMD yawana basa iri uye iri kugadzirira imwe nzira kune Apple M1 SoC. Iyo SoC nyowani ine ARM CPU yakagadzirirwa navo uye neyakaunganidzwa DRAM.
Iyi K12 FFX microarchitecture yaive yakavakirwa pane iyo 8-chidimbu ISA ARMv64, uye pakutanga zvaitarisirwa kugadzira machipisi kune maseva anoshanda. Asi ikozvino chinangwa che AMD hachina kujekeswa zvakanyanya. Dzinogona kuve dzakanangana nezvizvarwa zvitsva zvemabhuku epamusoro-ekushandisa uye nhare mbozha.
Izvo zvinoita sezviri pachena ndezvekuti ivo vanoda bheji rinokunda, vachishandisa maARM cores uye Radeon GPU (RDNA2) yakasanganiswa mune imwe SoC. Chinhu chaunoda zvakare kuita Samsung. Nenzira iyi, kushanda kwesimba uye mashandiro emaARM akabatanidzwa, pamwe chete neyakajeka giraidhi yekuita kweRadeon, iyo yaizopfuura maGPU ayo ave kushandiswa mupasi reARM (ona PowerVR, Adreno, ...).
Izvi zvinogona kugadzirisa dambudziko reM1 GPU raitaurwa naLinus Torvalds here?. Ehe zvichave zvinonakidza, nekuti kune Radeon GPUs kune vatyairi, saka zvinogona kuve zviri nyore chinja Linux saka kuti inoshanda zvakakwana neaya machipisi. Vachave iwo zvikwata izvo Linus Torvalds anotarisira zvakanyanya? Tichaona, asi nhau, kunyangwe paine pasati paine data rakawanda parizvino, ndinozviona zvichinakidza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AMD K12 inodzoka…: dzosa ARM yayo microarchitecture
Beaker, iyo P2P browser yemasaiti akasarudzika